Daawo Kooxda Alshabaab Oo Soo Bandhigay Nin Ay Ku Sheegeen Taliyihii Xerada Cidianka Ceel Buur
Wararka September 14, 2017
London(Allssc):Xarakada Al Shabaab ayaa Warbaahinta taageerta u soo bandhigtay sargaal ay sheegeen in uu katirsanaa Ciidanka Milatariga Soomaaliya ,kaa oo isku soo dhiibay dhankooda kana soo baxay dhinaca dowlada.
Munaasabad ka dhacday deegaan katirsan gobolka Galgaduud ayaa kooxda A Shabaab waxa ay kusoo bandhigeen Labo Xidigle Cabdullaahi Maxamuud Cali Xeynuuf ( Cabdullaahi Jareer) oo Shabaab sheegeen in uu ahaa talihii ciidanka Milatariga ee ka baxay degmada Ceel Buur .
Sargaalkan ayaa sheegay in uu katirsanaa ciidanka Milatariga Soomaaliya uuna kasoo tagay magaalada Baladweyne uu ku sugnaa, waxa uu xusay in uu go’aansaday in uu kasoo baxay ciidanka Milatariga isku soo dhiibo Al Shabaab.
Cabdullaahi Maxamuud Cali oo ka hadlay munaasabada lagu soo bandhigay ayaa sheegay in uu ka Towbad keenay la shaqeynta waxa uu ugu yeeray cadowga islamarkaana uu ka qoomameynayo dhibaatadii uu ugeystay shacabka Soomaaliyeed.
Ninkan Al Shababa kusoo bandhigeen Gobolka Galgaduud ayaa waxaa la socday xaaskiisa iyo caruur uu dhalay, mana jiro ilaa hada wax war ah oo kasoo baxay taliska Milatariga gobolada Dhaxe oo ku aadan sargaalkan Al Shabaab sheegeen in uu isku soo dhiibay.